2018 Nhungamiro Yezvekuchirapa Muviri Mishahara | Average Sport PT Zviwanikwa
Chiremba weMweya Mishawa: Mufambisi Wokubhadhara Ranges KweP PT
Kurapa Kwepanyama Mishawa: A State By State Guide
Mitambo Mushonga Wepanyama Mucherechedzo Mutevedzeri: Mutungamiri pane Zvaunofunga
Chii Chinonzi Animal Physical Therapist?
Your Yourrapist Equipment List List
Chii Chirwere Chepanyama?
Unogona Kubatsirwa Nekurapwa Kwepanyama Here?
Ace the Physical Therapist Hurukuro
Chiremba wepanyama Job Search
Wakagadzirira Chirongwa ChechiKristu Here?
Physical Therapy Mutevedzeri Mushandi
The mubhadharo wechiremba wepanyama (PT) is variable, depending on various factors, such as education, location, experience and skill sets. So, how much actually does a physical therapist make?
Maererano Bhizinesi reBasa Statistics, ivo average pt salary for physical therapist and sports therapist in the United States iri $ 86,520 pagore, which is 103% higher than the average salary of Americans. The median pay for a physical therapist is $41.59 per hour, $1,663 per week and $7,210 per month. There is variance within the different disciplines such as a dedicated sports physical therapist.
Heano muvhareji weP PT mubhadharo vs yevheji yekusvika munyika yose:
Mari yegore negore
Chiremba wepanyama $41.59 $1,663 $7,210 $86,520
2 Misha yebhadharo: mabheti akachengetedzwa uye akareruka
2.1 Kutanga mubhadharo: chii chaunogona kutarisira pakupinda
2.2 Top kubhadhara inoti: ndezvipi nzvimbo dzine misha mikuru
3 Makambani makuru ekubhadhara: nzvimbo dzekuda dzinogona kubhadhara zvakawanda
4 Vose vese vane maitiro ekurapa Vanachiremba here?
5.1 Zvinhu zvakawanda zvinofanira kufunga nezvazvo
6 Mhando dzePhysical Therapists
6.1 Indasitiri inochinja kuumba itsva mabasa
7 Kusanzwisisika pane nzvimbo yekukwirira kune mari yakakwirira
Pamusana pehuwandu hwehuwandu hunowanika paInternet nhasi, vanhu vanogona kuziva chero chavanoda uye vanoda kuziva nezvebasa ravanoda kuita. Kubva pakuona kuti mabasa mazhinji anongororerwa gore rakadini kuwana tsanangudzo yebasa rebasa iro basa rinoita, ruzivo rwakawanikwa nevanhu runogona kukosha. Saka, kana munhu achida kuziva chokwadi pamusoro pevarapi vemaviri uye zvavanoita, vanogona kutarisa paIndaneti kuti vapedze tsvakurudzo yavo vasati vaita sarudzo yekuwana chidimbu mumunda.
Kutanga, vanhu vazhinji vanofarira kuziva zvakawanda pamusoro pezvavanoita, maawa akawanda avanoshanda, ndeapi mavarwere avanoona, marudzi api avanogona kuonekwa mukati uye zvimwe zvinhu zvakawanda zvinogona kuvabatsira nekuita chisarudzo chakanaka. Nekunge zvataurwa izvi, hezvino zvimwe zvezvakataurwa pamusoro pezvimwe zviitiko zvebasa zvichangoitika uye ruzivo rwehuwandu hwemari.
Misha yebhadharo: mabheti akachengetedzwa uye akareruka
P PT yakagadziridzwa inogona kuwana zvishoma $ 60,600 pagore, zvinoreva $ 29.13 paawa uye $ 5,050 pamwedzi. Munhu mukuru anogona kuenzanisa $ 120,000 gore zvichienderana nenzvimbo, ruzivo, nezvimwewo.
Kutanga mubhadharo: chii chaunogona kutarisira pakupinda
Kutanga mubhadharo wezvechiremba wepanyama paavhareji i $ 57,220 pagore ichirova huwandu hwe $ 105,900 pagore .. A PT mubatsiri anogona kutarisira kutanga pamusana we $ around $ 34,735 achienda kumadhora anodarika $ 66,460 gore negore.
Mune zvimwe zviitiko, mumwe munhu angave asingazivi kuti vachange varipi pavanopedza zvidzidzo zvavo. Zvisinei, vangave vachida kuziva kuti vachawana mari yakawanda sei kana vachiita basa iri. Kune avo vanowira mumamiriro ezvinhu aya, kune ruzivo runogona kuvapa iyo inenge yakaenzana yakagadziriswa inowanikwa pamusana wekubvira mari inowanikwa gore negore. Semuenzaniso, muvhareji wekutanga wega wega wega wepachiremba wepanyama ndeye $ $ 57,220 (nguva yakazara) kana $ 34,735 (Chikamu chikamu). Munhu wacho anogonawo kuderedza mari yakawanda kana vachida kushanda mune imwe yenzvimbo dzakakwirira dzinotora seNevada. Muzviitiko izvi, vanhu vanogona kuwana zvakanyanya 33% zvekushanda munzvimbo ino.
Top kubhadhara inoti: ndezvipi nzvimbo dzine misha mikuru
Mwedzi unowana mari
Gore negore mari
Kune dzimwe nzvimbo dzisiri dzemaguta, kushanda mukati Upper Eastern Shore, Maryland or Northwest Iowa can bring you income as high as $118,000 per annum.
vhiki yevhiki nevhiki
Makambani makuru ekubhadhara: nzvimbo dzekuda dzinogona kubhadhara zvakawanda
Mishonga yehutano yehutano ndiyo yakanakisisa kubhadhara indasitiri, sezvinoratidzira tafura iri pasi apa inoratidza. Mubairo unogona kusvika $ 95,440 pagore ($ 45.88 neawa).
Zuva roga roga
Musha wehutano Care Services $45.88 $1,835 $7,953 $95,440
Kutungamira Scientific and Technical Consulting Services $44.31 $1,773 $7,681 $92,170
Kutungamira uye Kutsigira uye Kushandiswa Kwekutakura uye Remediation Services $44.26 $1,771 $7,673 $92,070
Administrative uye Support Services $44.26 $1,771 $7,673 $92,070
Kubva: US Bureau of Labor Statistics
Mari: US Dollars (USD)
Vose vese vane maitiro ekurapa Vanachiremba here?
Kare, kana mumwe munhu akabvunza kana vari vanachiremba, mhinduro yaizove hongu, asi kwete sezvairi kushanda kuva chiremba wezvechiremba. Nhasi, zvisinei, hazvishamisi kuti basa richinje maitiro avanoonekwa nguva nenguva. Zvechokwadi, nekuda kwemabasa akawedzerwa, vashandi vakaita sePhysical Therapists vanozoshandura nguva yakawedzerwa nekubvumirwa patsva uye zvinowanikwa mvumo. Nokudaro, kune avo vanoda kuenderera mberi nekushandurwa kwemazuva ano ku Physical Therapy, munogona kunge muchida kuziva kuti uyu nyanzvi iye zvino, sekuna 2015, chikamu cheDhigiri we Physical Therapy Program.
Iyi purogiramu yakagadzirirwa kugadzirira vadzidzi kuti vawane zvakakodzera. Mune zvakananga, nokuda kwehutano hwavo hwemishonga yerisheni yekuongorora iyo inowanikwa mune zvese makumi mashanu. Mushure mekuzadzisa Chiremba wePhysical Therapy Program, munhu mumwechete anoenderera mberi nekudzidzira kwavo mune zvekugara nekudyidzana. Nekushandiswa kweiyo mitemo mitsva, gore 2020 inoratidzika segore iro varapi venyama vachaonekwa sechiremba wehutano hwepanyama.
Munhu asati azvisarudzira pamhando ipi zvayo yebasa, chimwe chezvinhu zvekutanga zvavanoda kuziva ndezvekuti vanhu vari mumhizha yavo vanowana sei gore negore. Nenzira yakanaka, pane zvishoma zvemashoko ekubhadhara paIndaneti zvinogona kubatsira kupindura izvi nemimwe mibvunzo yakabatana. Chimwe chezvinonyanya kuzivikanwa, zvisinei, iyo Bureau of Labor uye Statistics kubvira iyo sangano rehurumende inopa tsanangudzo yebasa, maonero ezvamangwana uye mari yezvino yakawanikwa munzvimbo dzose muUnited States.
Zvinhu zvakawanda zvinofanira kufunga nezvazvo
Nokudaro, kupindura kumubvunzo, mutapi wepanyama anoita gore rega rega? Zvakakosha kucherechedza kuti mhinduro yacho inogona kusiyanisa zvakanyanya kubva pane zvinhu zvakawanda kusanganisira nzvimbo inoshandiswa nevanhu, iyo inoshandiswa nevashandi (kureva mabasa ehutano hwehutano, mabasa emabasa, kutungamira uye mabasa ekutsigira, Management uye Technical Consulting Services uye akafanana.
Nokudaro, kana munhu achida kubhadhara mari yavanogona kuita, ivo vachafanirwa kuongorora izvi zvakanyatsotarisirwa kuti vawane ruzivo rwakakwana rwekubhadhara mari. Somuenzaniso, kana munhu akabhadhara kushanda muJackville, Florida, mari yavo yegore ichava $ 115,440 kana kana vakasarudza kushanda muRoanoke, Virginia, mubhadharo wavo uchava $ 110,680.
Mhando dzePhysical Therapists
Chimwe chinhu chinokosha chinofungidzirwa kuti munhu anofanira kunge achiziva apo kutsvakurudza basa iri nderomhando dzehutano hwemunhu hunofanira kusarudzwa kubva. Kunyange zvazvo vanhu vazhinji vangave vasina kuzviziva, pane mitambo yemasikirwo, masayendisiti emabasa,
Geriatric PT, Pediatric PT, Neurological PT nezvimwe zvakadaro. Rudzi rumwe nerumwe rune basa rakananga kune varwere vavanobata. Saka, zvinokosha zvakare kune vanhu vari kutarisa kuona kuti mutapi wepanyama anoita awa kana kuti iyo yakabhadharwa yezvechirwere chemapiro ehutano wepachiremba mukati medu inotarisa zvinhu izvi vasati vapedzisa tsvakurudzo yavo.
Indasitiri inochinja kuumba itsva mabasa
Mumakore achangobva kupfuura, maonero emamwe mabasa anowedzera zvakajeka kupfuura vamwe. Chimwe chacho ndechokuti mafiropiti anoonekwa. Nemhaka yekuti iyi indasitiri yave ichinyanya kuchinja kwenguva uye basa ravari kutamba riri rinokosha kune varwere vanowana kurapwa kwavanoda, ino inguva yakanakisisa yekupinda mumhando iyi yekurapa. Kutaura zvazviri, vanhu vari mumabasa aya vachazivikanwa sechiremba wezvechirwere chepanyama sekutanga kwe2020. Saka, vanhu vanofarira kutsvaga basa iri vachave nemikana yakawanda inowanika kushanda munzvimbo dzakasiyana-siyana uye zvirongwa zvinosanganisira mabasa ehutano hwehutano, mabasa emabasa, pamwe nevamwe.
Kusanzwisisika pane nzvimbo yekukwirira kune mari yakakwirira
Uyezve, kana mubhadharo uyo munhu aunowana ndeye kusarudza, pane zvinhu zvakawanda zvavanofanira kuziva. Semuenzaniso, nyika inobhadhara zvakanyanya kune vashandi vemaviri inogona kuwanika paIndaneti kuitira kuti vanhu vagone kutsvaga uye vasarudze nzvimbo dzavanoda chaizvo kushanda. Nharaunda dzezvikwereti izvi dzichasiyana-siyana nokuti pane zvimwe zvinhu zvinokonzera kubhadhara kwegore rose, mutengo weawa wega kana kuti yakaitwa sei mwedzi.
Kuti uverenge iyi inobhadhara zvakanaka, munhu wacho achada kuziva kuti basa rekurapwa kwepanyama rinowanikwa, chii chirimo chavanozoshanda (utano hwehutano hwevashandi nemabasa emabasa) uye zita redu remabasa.